अन्तिम मिनेट यात्रा को लागी उत्तम यात्रा अनुप्रयोगहरु – Vocre
हतारमा अघि बढ्नुपर्छ? कहिलेकाहीँ जीवनमा सबै भन्दा राम्रो चीजहरू हुन्छन् जब तपाइँ तिनीहरूलाई आशा गर्नुहुन्न. के रमाइलो छैन? अन्तिम-मिनेट यात्रा योजनाहरू बनाउँदै. यसैले हामीले अन्तिम-मिनेट यात्राको लागि उत्कृष्ट यात्रा एपहरूको सूची कम्पाइल गरेका छौं - तपाइँ बिना कुनै बाधा बिना आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न र वरपर सुनिश्चित गर्न।.
उत्तम यात्रा एपहरू #1: अन्तिम-मिनेट यात्राको लागि भाषा अनुवाद
कहिलेकाहीँ सडकमा हिर्काउनु अघि नयाँ भाषा सिक्नको लागि समय हुँदैन. कहिले अन्तिम-मिनेट यात्रा प्रहार गर्दछ, हामीले तपाइँलाई यी यात्रा एपहरूसँग कभर गर्यौं.
अन्तिम-मिनेट यात्राको लागि उत्तम नि: शुल्क एप: Vocre
Vocre जाँदा शब्दहरू र वाक्यांशहरू खोज्नको लागि उपयुक्त छ. कसरी भन्ने सम्झना छैन ‘hello' अन्य भाषाहरूमा? कस्तो होला साझा स्प्यानिश वाक्यांश? तपाईलाई आवश्यक पर्दैन जब तपाई केवल शब्द टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र तुरुन्त अनुवाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले अफलाइन भाषाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको गन्तव्यमा सेल सेवा वा इन्टरनेट पहुँच नभएको बेला कुन कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ.
भाषाको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो जाँच गर्नुहोस् नयाँ भाषा सिक्न सजिलो सुझाव.
उत्तम यात्रा एपहरू #2: छुट उडानहरू
जब यो अन्तिम-मिनेट यात्रा को लागी आउँदछ, एउटा कुरा निश्चित छ: सस्तो उडान खोज्न सजिलो छैन. भाग्यवश, हामीलाई केही एपहरू थाहा छ जसले तपाईंको उडान बुकिङलाई अलि सजिलो बनाउँदछ — र यदि त्यहाँ कुनै सम्झौता छ भने, तिनीहरूले फेला पार्नेछन्!
यदि तपाइँसँग तपाइँको प्रस्थान मिति मा सानो घुमाउरो कोठा छ, FlightHopper जाँच गर्नुहोस्. यो एपले तपाईंलाई यात्राको लागि उत्तम मितिहरू बताउन सक्छ (मूल्यमा आधारित) साथै यदि तपाइँ किन्नुपर्दछ (तपाईंको मितिमा आधारित) वा राम्रो मूल्यको लागि पर्खनुहोस्.
हामी सस्तो उडानहरू फेला पार्न SkyScanner प्रयोग गर्न मन पराउँछौं! यो एप प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो छ र प्रायः बजेट यात्राको सन्दर्भमा केही नवीनतम जानकारीहरू छन्. तिनीहरू समय-समयमा 'गोप्य' उडान सम्झौताहरू पोस्ट गर्नका लागि पनि परिचित छन्.
कयाक एक पुरानो तर एक राम्रो छ. तपाईं उडानहरूमा सम्झौताहरू खोज्न सक्नुहुन्छ, यस एपमा कार र होटलहरू. कुनै फरक पर्दैन यदि तपाइँ अग्रिम यात्रा बुक गर्दै हुनुहुन्छ वा अन्तिम मिनेटमा केहि बुक गर्न आवश्यक छ, तपाईंले इन्टरनेटमा सबैभन्दा राम्रो मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा तपाईं ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ — विशेष गरी यदि तपाईंले हटलाइन र एक्सपेडियामा मूल्यहरू हेर्न छनौट गर्नुभयो भने, पनि.
मोबाइल एपको साथ आफ्नो यात्रा अनुभव सुधार गर्नुहोस्!
उत्तम यात्रा एपहरू #3: लजिंग, होटल र Airbnb
अन्तिम मिनेटमा कोठा पाउन सधैं सजिलो हुँदैन. होटलहरू अलि बढी गर्न सक्षम छन्, तर घरको सेयर र होम एक्सचेन्जहरू तपाईंले छोड्नु अघि एक वा दुई दिन मात्र सुरक्षित गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन सक्छ. त्यस कारणले, हामीले VRBO लाई यो सूचीबाट हटाएका छौं (यद्यपि हामी योजनाबद्ध यात्राको लागि यो एपलाई माया गर्छौं). निम्न एपहरू सबै अन्तिम-मिनेट बुकरलाई पूरा गर्छन्.
कहिलेकाहीँ सडकमा हिर्काउनु अघि नयाँ भाषा सिक्नको लागि समय हुँदैन. तर तपाईलाई केहि चाहिन्छ जब तपाई के गर्नुहुन्छ साझा चिनियाँ वाक्यांश? जब अन्तिम मिनेट यात्रा स्ट्राइक, हामीले तपाइँलाई यी यात्रा एपहरूसँग कभर गर्यौं.
Hotels.com ले संसारका हरेक प्रमुख होटल चेनसँग सम्झौता गरेको छ. यो एक सम्झौता खोज्न सजिलो छ (अन्तिम मिनेटको सम्झौता पनि) यस एपमा. तपाईं अनलाइन वा सिधै एपमा बुक गर्न सक्नुहुन्छ. सबै भन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि तिनीहरूसँग एक वफादारी कार्यक्रम छ जसले अतिथिहरूलाई बसेपछि नि:शुल्क राती बस्न अनुमति दिन्छ 10 तिनीहरूको एपमा बुक गरिएको रातहरू!
होटलहरू आज राती
HotelsTonight ले अन्तिम-मिनेट होटल बुकिङ मा माहिर छ. वास्तबमा, अन्तिम मिनेट सम्म बुक गर्न पर्खनुले वास्तवमा HotelsTonight मा बुक गर्दा तपाईंको पैसा बचत गर्न सक्छ. तिनीहरू खाली कोठाहरू भएका होटलहरूसँग अन्तिम-मिनेट सम्झौताहरू सुरक्षित गर्छन् र बचतहरू तपाईंलाई हस्तान्तरण गर्छन्.
होम एक्सचेन्ज वेबसाइटहरू धेरै दुर्लभ हुन्थ्यो. त्यहाँ त्यहाँ केही मात्र थिए — र तिनीहरूका धेरैजसो एपहरूमा कमजोर प्रयोगकर्ता अनुभवहरू थिए. आजभोलि, होम एक्सचेन्जले तपाईंको पोइन्टहरू वा पारस्परिक विनिमय बुक गरेर अन्तिम-मिनेट एक्सचेन्जहरू बुक गर्न सजिलो बनाएको छ।. तिमीले पायौ 1,300 केवल साइन अप गर्न र तपाईंको जानकारी सेवन फारम पूरा गर्नका लागि अंकहरू. त्यसपछि तपाईले ती बिन्दुहरू नगदको रूपमा संसारभरका घरहरूमा बस्न वा पारस्परिक विनिमयको लागि आफ्नो घर अनलाइन राख्न सक्नुहुन्छ। (कोही तपाईको घरमा बस्छ ठीक त्यही समयमा तपाई उनीहरुमा बस्नुहुन्छ). धेरै घरहरू अब अन्तिम-मिनेट बुकिङका लागि उपलब्ध छन्. हामीले यस गर्मीमा यात्राको केही हप्ता अघि मात्र सिएटलमा एउटा अपार्टमेन्ट बुक गर्न सक्षम भयौं!
उत्तम यात्रा एपहरू #4: Rideshare/Getting Arround
राइडशेयर एपहरू विगत केही वर्षहरूमा तुलनात्मक रूपमा लोकप्रिय भएका छन्, र यो किन हेर्न सजिलो छ. तिनीहरूले गन्तव्यमा पुग्न र वरिपरि अत्यन्तै सजिलो बनाउँछन् - तपाईलाई स्थानीय भाषा थाहा नभए पनि!
Uber अहिले बजारमा सबैभन्दा ठूलो राइडशेयर एप हो. तिनीहरू संसारभरका देशहरूमा छन्. तपाईं सामान्यतया शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ कि Uber लगभग कुनै पनि गन्तव्यमा उपलब्ध हुनेछ. यद्यपि, विदेशी देशहरूमा Uber लिने बारे सुझावहरू र चालहरू खोज्न यो दुख्दैन किनकि नियमहरू गन्तव्य अनुसार फरक हुन सक्छ।.
यो राइडशेयर एप अहिले अमेरिकामा मात्र उपलब्ध छ. तर Uber को लागि एक राम्रो विकल्प हो. Uber को शुल्क कुनै पनि समयमा धेरै उच्च देखिन्छ भने, त्यहाँ राम्रो सम्झौता छ कि भनेर हेर्न Lyft को जाँच गर्नुहोस्.
दिदी चीनको एउटा एप हो जसले धेरै चर्चा पाइरहेको छ. यो धेरै देशहरूमा Uber को सस्तो विकल्प हो (अमेरिका बाहेक अन्य).
यदि तपाइँ कार भाडामा लिने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, Waze डाउनलोड गर्न नबिर्सनुहोस्. यो एपले तपाईंलाई तीव्र गतिको टिकटहरूबाट बच्न र ट्राफिक प्रशस्त हुँदा वैकल्पिक मार्गहरू फेला पार्न मद्दत गर्न सक्छ.
उत्तम यात्रा एपहरू #5: नक्सा/सार्वजनिक ट्रान्जिट
गुगल नक्सा संसारभरि सार्वजनिक यातायातका लागि सबैभन्दा राम्रो नक्सा एप र सबैभन्दा राम्रो एप हो. जबकि केहि एपहरूले केहि शहरहरूमा Google नक्सालाई ट्रम्प गर्न सक्छन्, यो वरपर प्राप्त गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो विश्वव्यापी एप हो. केवल याद गर्नुहोस् कि गुगल पनि गलत छ - दिशा निर्देशनहरू यति नजिक नपछ्याउनुहोस् कि तपाईं हवाइजहाजको रनवेमा पुग्नुहुन्छ।.